KwiCawa elandelayo, saba nethuba lokundwendwela sobabini. Sancokola ngoxanduva lwakhe oluninzi njengomongameli wengingqi. Xa sasincokola, Ndava kunyanzelekile ukuba ndimnike iingcebiso ngomsebenzi wabafundisi beminyaka emini epheleleyo kwaye nokuba yena namalungu abo bangabanceda njani aba befundisi basengingqini yakhe. Emva koko Ndaye ndafumanisa ukuba le ndoda yayithandaza ukuba ifumane ingcebiso yoku. Kuye undwendwelo lwethu yayibubungqina obukhethekileyo bokuba imithandazo yakhe yaviwa kwaye yaphendulwa. Oku kwakungathi yintlanganiso eqhelekileyo kodwa mna Ndiqinisekile ukuba yayikhokelwe nguMoya kwaye yenza umahluko phaya kula ngingqi yobomi bakhe kwaye nasemsebenzini wakhe, ebomini bamalungu wakhe kwaye nasempumelelweni